गर्भवती भएका महिलालाई किन बढी बान्ता हुन्छ ? – Nepali Health
गर्भवती भएका महिलालाई किन बढी बान्ता हुन्छ ?
२०७४ जेठ ३१ गते १८:०९ मा प्रकाशित
गर्भवती महिलालाई किन बढी बान्ता हुन्छ ? यसको बैज्ञानिक कारण छ कि ? यसबाट राहत पाउने उपाय केही छ ?
– मेनुका श्रेष्ठ (२१) धरान
पहिले पहिले गाँउघर तिर विवाहित महिलालाई बान्ता आउन थाल्यो भने परिवारका अन्य सदस्यहरुले गर्भवती भएको हो कि भनेर अडकल काट्ने चलन थियो । त्यसैले गर्भवती हुँनु र बान्ता हुनुको अन्योन्यास्रित सम्वन्ध छ भन्दा फरक नपर्ला ।
तर यसको खास कारण कारण के हो भने गर्भवती महिलाको पेटमा शिशुलाई घेर्ने थैली अर्थात साल (प्लासेन्टा) हुन्छ । त्यसबाट एक प्रकारको हर्मोन निस्किन्छ ‘ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ( एचसीजी)’ । जव त्यसको लेभल बढ्न थाल्छ त्यसपछि गर्भवती महिलामा बान्ता सुरु हुन थाल्छ ।
प्रायजसो पाँचौ हप्ता देखि बान्ता हुन सुरु गर्छ । यदि गर्भ वसेको रहेछ भने महिनाबारी हुन एक हप्ता ढिलो हुने वित्तिकै बान्ता हुन थालिहाल्छ र यो क्रम बाह्र हप्तासम्म बढदै जान्छ । त्यसपछि कम हुन थाल्छ । तर कसैकसैलाई बच्चा पाउने दिनसम्म पनि हुन्छ ।
खासमा यो सुरुमै देखिने हर्मोन हो । यो हर्मोन बढेपछि मात्रै प्रेग्नेन्सी पोजेटिभ देखिने हो । अर्थात प्रेग्नेन्सी टेष्टमा देखिने हर्मोन नै यहि हो ।
बढी बान्ता हुने कारण
पेटमा दुईवटा तीनवटा बच्चा भएको वा बच्चा बस्ने ठाँउमा सामान्य समस्या जस्तो देखिएको छ भने बढी हुन्छ । हाम्रो अनुहार अरुको अनुहारसंग अलग देखिए जस्तै यो हर्मोनले हाम्रो शरीरमा गर्ने रेस्पोन्स पनि अलग अलग हुन्छ । अर्थात हर्मोनको रेस्पोन्स व्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुनसक्छ ।
त्यसैले कसैलाई बढी र कसैलाई कम बान्ता हुन्छ । एउटा मान्छेलाई पनि पहिलो पटक गर्भवती हुँदा र दोस्रोपटक हुँदा बान्ता हुने दरमा फरक हुनसक्छ ।
बान्ताकै आधारमा अनुमान गर्नु गलत
कतिपयले गर्भवती महिलाले गर्ने बान्ताको दरलाई हेरेर पेटमा छोरा छ कि छोरी छ भन्ने समेत थाह हुने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । तर यो सर्वथा गलत कुरा हो । बान्ताको दरबाट पेट भित्र छोरा छ कि छोरी छ भन्ने थाह पाउन सकिदैन् । वा बान्ताको मात्राले पेट भित्रको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न सकिदैन ।
बान्ता भएका बेला राहत पाउने कसरी ?
यस्तो बेलामा पति र परिवारका सदस्यहरुको सहयोग सर्पोटको एकदमै खाँचो पर्छ । त्यो मनोबैज्ञानिक रुपबाट पनि सहयोग गर्छ । बान्ता आउला जस्तो भइरहन्छ ।
आफूलाई मनपरेको मात्रै खाना खानुपर्छ । मन नपरेको खाना खाएमा झन गन्हाउँछ । त्यसैपनि बमिट हुन्छ ।
विहान उठ्ने वित्तिकै ड्राई बस्तु खानुपर्छ ।
मन नलागेको बेलामा पेट बोक्यो भने पनि बान्ता धेरै हुने गर्छ । त्यसैले गर्भवती हुन मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।
हल्का व्यायम गर्ने, फ्रेस हुने, स्वच्छ हावामा हिडनुपर्छ । मनमा सकारात्मक सोच लिनुपर्छ । मुभी हेर्दा पनि सकारात्मक भावका हेर्नुपर्छ । यस्तो गरयो भने बान्ता कम हुन्छ ।
कसै कसैलाई यति गर्दा पनि हुँदैन र औषधि खानै पर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि लिनुपर्छ ।
गर्भवती हुँदाको बान्ता रोक्ने औषधि विहान खाली पेटमा खानुपर्छ र औषधि खाइसकेपछि एक घण्टा केही खानु हुँदैन् । औषधि खाँदा धेरै पानी खानु हुँदैन थोरै पानीले निल्नु मात्रै पर्छ ।
बास्तवमा यो पेटको शिशुको लागि फाइदा जनक हो । यहि हर्मोनले गर्दा पेटको शिशु बढने हो । तर आमालाई असर गर्छ । यो हर्मोन कम रहेछ भने बाहिरबाट त्यो हर्मोन दिनुपर्छ ।